MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA BRITTANY SPANIEL DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Brittany Spaniel Dog
Scout the Brittany markay tahay 1 1/2 sano jir
Liiska eeyaha Brittany Mix Breed
Brittany waa eey wadnihiisu dhexdhexaad yahay oo dhexdhexaad ah. Lugaha eyga dhaadheer ayaa la mid ah dhererka garbaha iyo dhererka jirka. Dhexdhexaad dhexdhexaad ah, madaxa wareegsan ayaa qaab-qaabeed u eg, laakiin aan aad u ballaaranayn sida uu u dheer yahay. Jidadka istaaga ayaa si khafiif ah u socda. Xuubku waa dherer dhexdhexaad ah. Sanka ayaa leh sanka oo ballaaran wuxuuna ku yimaadaa fawn, tan, midab bunni ah ama casaan qoto dheer leh, waxay kuxirantahay midabka jaakadiisa. Sanka madow lama ogola giraanta bandhiga. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Indhuhu waxay ku yimaadaan midabbo bunni mugdi ah ilaa midabbada iyo dhagaxa, waxay kuxirantahay midabka jaakadda. Dhegaha saddex geesoodka ah ayaa meel sare la dhigay, iyagoo jiifa meel u dhow madaxa. Cagaha way yar yihiin oo suulasha si fiican u roon iyo suuf adag. Dabada ayaa sare loo dhigay, ama dabiici ahaan gaaban ama ay ku xiran tahay 4 inji ama ka yar (10 cm). Xusuusin: waa sharci daro in dabo la beero inta badan Yurub. Mararka qaarkood waxaa la saaraa goynta. Koodhka keliya ayaa si khafiif ah baalal leh, oo aan weligiis soo laabanayn, laakiin cufan, fidsan ama ruxmaya. Adduunyada oo dhan Brittany ama Epagneul Breton waxay aqbashaa 5 midab: liin iyo caddaan, beerka iyo caddaanka, madow iyo caddaan, beerka saddex-geesoodka ah, iyo midabkeedu madow yahay, qaab mid cad ama wareeg ah, iyadoo qaarkoodna ay shiikhayaan. USA (AKC) iyo Kanada (CKC) ma aqoonsana madow. Dhammaan waddamada kale ee adduunka oo dhan waxay aqbalaan midabada oo dhan waxayna raacaan heerka FCI ee nooca.
Brittany waa mid caqli badan oo fudud in la maareeyo iyo u tababaran ugaarsiga . Waa xayawaan jecel oo jilicsan adeec leh oo had iyo jeer doonaya inuu ka farxiyo. Farxad iyo feejignaan, noocani firfircoon waa ugaarsi aad u firfircoon oo xamaasad badan. Jacayl, laakiin madaxbannaan waa feker xor ah. Dabeecad wanaagsan oo sahlan in la daryeelo. Brittanys oo ka maqan jimicsi maskaxeed ama mid jireed waxay noqon doontaa mid kacsan oo aan xasilloonaynin sida tamarta uga soo baxdo gudahooda. Markay ugaarsanayan waxay u baahan yihiin in laga saaro socod socod maalinle ah oo eeyga looga yeelo inuu ku cidhibtiro dhinac taabto. Marnaba ha u oggolaan inay ka baxaan hore, sida hoggaamiye xirmooyinka uu ugu horreeyo. Waxay sidoo kale u baahan yihiin a milkiilaha adag , laakiin deggan, kalsooni leh oo iswaafaqsan oo isku mar ah, dejinta xeerarka oo ku dheg iyaga. Brittanys oo aan lahayn jimicsi maskaxeed / jir ahaaneed iyo / ama aan ahayn meeshooda ku aamin baakadka waxaa ku jiri kara cabsi iyo / ama xishood. Bulsho ballaadhan sida eey. Dareenka ugaarsiga eeyga dartiis, Brittany waxay jeceshahay inay meeraysato. Way ku fiican yihiin carruurta haddii laga soo koriyo iyaga oo ka soo baxa eeyaha iyo / ama si habboon loo dhexgalo. Waxay la jaanqaadaysaa dhammaan noocyada dhulka: kaynta, bannaanka ama buuraha. Waxay u adkeysataa xaaladaha qabow iyo qoyaanka. Waxaa loo adeegsadaa gaar ahaan ugaarsiga looxa, shimbiraha iyo bakaylaha, waana mid had iyo jeer firfircoon, xamaasad badan oo aan daal lahayn. Waxay kaloo leedahay dareen aad u fiican oo biyaha looga soo ceshan karo. Brittany waxay kasbatay caan caan ah malaayiin ugaarsadeyaal ah sababtoo ah cabirkeeda dhexdhexaadka ah, taas oo u ogolaaneysa ugaarsadayaasha inay si fudud ku daabulaan Sababtoo ah dabeecaddiisa jilicsan, waxaa sidoo kale caan ku ah eey wehel ah.
Dhererka: Ragga 17 - 21 inji (43 - 53 cm) Dumarka 18 - 20 inji (46 - 51 cm)
Miisaanka: Ragga 35 - 40 rodol (16 - 18 kg) Dumarka 30 - 40 rodol (14 - 18 kg)
Ku soo dhowaanshaha sinta dysplasia, suuxdinta iyo naaska kansarka .
Brittany laguma talinayo nolosha guriga. Waxay ku firfircoon yihiin gudaha waxayna ku fiicnaan doonaan acreage. Noocani wuxuu u adkaystaa xaaladaha qabow iyo qoyaanka.
Brittanys waxay ubaahantahay oo jeceshahay jimicsi balaaran waxayna leedahay adkeyn weyn. Waa in lagu qaataa muddo dheer, cidhiidhi ah socod maalinle ah ama orod oo u baahan milkiile firfircoon.
1 - 11 eeyo, isku celcelis 6
Cadayashada joogtada ah ee dhererka dhexdhexaadka ah, jaakad fidsan runtii waa wax kasta oo loo baahan yahay si loogu ilaaliyo xaalad wanaagsan. Maydho ama shaambo qalalan markay lagama maarmaan noqoto. Ey dayactir hooseeya, laakiin jarista taxaddar leh ayaa lagama maarmaan ah haddii aad qorsheyneyso inaad tusto. Si taxaddar leh u hubi dhegaha, gaar ahaan marka eeygu uu ku maqnaa dhul qallafsan ama cadey ah. Noocani waa iftiin shidan.
Brittany waxaa loogu magac daray gobolka Brittany ee Faransiiska waxaana laga yaabaa inay tahay natiijada ka gudubka Orange iyo White Setter oo ay weheliyaan qaar aan si cad loo aqoon eeyaha Faransiiska Maaddaama Brittany ay u egtahay wax u eg Welsh Springer Spaniel qaar waxay u maleynayaan in labaduba ay isku xirnaan karaan. Noocani waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee tilmaamaya ugaarsiga shimbiraha. Wadamada qaar ayaa loo yaqaan 'Brittany Spaniel', hase yeeshe gudaha Mareykanka waxaa loogu yeeraa kaliya 'Brittany.' Brittany waxaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay Faransiiska 1896 waxaana markii ugu horreysay aqoonsaday xisbiga AKC 1934.
Gun Ey, Kooxda Ciyaaraha AKC
BCGB = Naadiga Brittany ee Boqortooyada Ingiriiska
Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC) = Brittany
Naadiga Kennelka Qaranka ee Australiya (ANKC) = Brittany
Diiwaanka xayawaanka Mareykanka, Inc. (APRI) = Brittany Spaniel
Naadiga Brittany ee Boqortooyada Ingiriiska (BCGB) = Brittany
Naadiga Kennelka Canadian (CKC) = Brittany Spaniel oo inta badan loo qoro Spaniel (Brittany)
Naadiga Kaynka Qaaradaha (CKC) = Brittany Spaniel
Naadiga Kennel ee Boqortooyada Ingiriiska (KCGB) = Brittany
Naadiga Kennelka Qaranka (NKC) = Brittany Spaniel
Naadiga Kaynta ee New Zealand (NZKC) = Brittany
Xuquuqda sawirka waxaa iska leh Shirley Chilcote, oo ah nin ka soo jeeda horyaalnimada Brittanys muddo ka badan 30 sano
Waylon Jennings the Brittany Spain - 'Waylon waa aqoonyahan raaxo leh. Wuxuu ka heli doonaa meesha ugu jilicsan guriga, xitaa haddii ay tahay sariirta bisadda. '
Waylon Jennings the Brittany Spaniel ayaa ku faaftay dabaqa
Owen oo ah Brittany sida eey fadhiisata cawska.
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Brittany
Sawirada Taranka Eeyaha Brittany 1
Eyda Brittany Spaniel: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
sawirada ter bull bull
adhijirka anatolian / iskudhafka weyn ee pyrenees
iswiiiska buuraha iswiiska eeyo yaryar
pekingese isku darka chihuahua timaha dheer